abanikazi Okwezomnotho nelifanelekile izindlu namafulethi ngokwethukela waqala ukulahla izibani incandescent bendabuko kanye ukuthola, isibonelo, izibani Halogen, kagesi amandla ukusetshenziswa eliningi ezincane. Yiqiniso, lezi amadivaysi futhi babe nobubi obuthile. Isimiso wokusebenza angabhekwa kabanzi.
kanjani izibani Halogen?
Amandla esisindisa izibani Halogen ngoba indlu - the G9 nezinye onobuhle - ngokomthetho walo wokusebenza zifana bendabuko esikhipha onobuhle. Ngo abavamile amalambu igabha kunalokho enkulu ingilazi Frosted noma kucace. umthamo wayo ugcwele ingxube gas, ngokuvamile i-nitrogen, argon noma zombili lezi zingxenye kanyekanye. Ophakathi nendawo ube intambo tungsten esiyingxenye kagesi kanye heats ngifinyelele 2500 ° C, okuyinto kudala ukuvutha. Zonke izinsimbi "amhlophe", kuhlanganise tungsten ne akhazimula lokhukhanya ezimhlophe, kodwa sibonga ukukhanyisa isibani kungaba abandayo noma efudumele.
Ngokungafani galogenki esikhipha
Izinga esikhipha isibani ngaso ukusetshenziswa evamile, nokuthi amahora 12 ngosuku, kungasebenza 1000 elektrochasov. Kungase kube nje umbuzo: "Yimuphi Yingakho umsebenzi wakhe ichithwa njengoba ugesi omningi" Lokhu kungenxa yokuthi ukusetshenziswa kwamandla uya ukufudumeza ngokwayo, onikeza isibani enkulu ngokuphindwe kabili kunezwe, kodwa hhayi ukukhanya. Ngokuhamba kwesikhathi, ngenxa ukushisa, bafudumale enkulu ube intambo tungsten liphele, futhi ngezinye izikhathi ngisho qhumisa. Futhi kule amanga umehluko omkhulu kusuka esikhipha galogenki.
Metallogalogennovye ukukhanyisa amadivayisi futhi wadala okusekelwe ukusetshenziswa sesigcilikisha eyenziwe tungsten kodwa ibekwe ku negabha eyenziwe asebenza ngebhethri lincane kakhulu. ingilazi Simple ngokufanele buqamama letimfishane kusukela sesigcilikisha uqale zigcwale amanzi futhi asebenza ngebhethri, kunalokho, kwandisa ukumelana layo ukuze vysokogradusnym okushisa.
Negesi e isibani intambo futhi galogenki futhi ehlukile. Ukuze samuntu wesibili uye wazakhela unesimo ukuhwamuka of tungsten okuyinto kwakha Halogen gaseous futhi umusi. Lapho kuhlangene ngazimbili yayo of tungsten ezingavikelekile imali ezindaweni futhi zinyamalale, impilo sevisi kakhulu enwetshiwe kwayo. Futhi, ngenxa enjalo jikelele igesi ingxube izinga lokushisa lehla kwayo. Lapho Halogen isetshenziswa, efana intambo lukhipha ekushiseni kwalo ukuze isikhala, kodwa kancane izikhathi 1.5 kuka uma usebenzisa i-nitrogen noma argon. umsebenzi okunjalo amadivaysi kungaba kakhulu ukunciphisa ukusetshenziswa kukagesi.
Izinzuzo izibani Halogen
Ukukhanyisa ngu Halogen benezingane eziningi sezici. Izimfanelo ezinhle zimi kanje:
- Perfect ukusetshenziswa uma udinga ukunakwa eyengeziwe emehlweni. I sasikhipha ukukhanya okukhulu kunciphisa eyestrain ngaphandle overstrains crystal.
- Perfect ukukhanyisa izinhlelo ezihambisana nezinhloso ukukhangisa, isibonelo, ukuheha abathengi noma amakhasimende ezingaba khona. Ukuze iwindi ukugqoka ukukhanya okumhlophe ukhetho best. Nge Halogen spotlight ungakha iphuzu focus. Abaningi Waphawula ukuthi nakuba evele umbala galogenok babe bunzima kakhulu futhi inki elihlale eziphilayo.
- Halogen spotlight esakhelwe uhlobo abhekwa efaneleka kakhulu yokwenza okukhanyisa egcekeni. Njengozakwabo LED, bona ayagcinwa kahle okushisa, amelana izici zangaphandle, kwezulu. Into esemqoka kuleli cala - uphawu ephelele. Spotlight nezibani Halogen ngokuba ekhaya, izithombe zazo ungakwazi ngaphambi uthenga ngokucophelela sihlole wokulungiselela, lapho u-20% ukonga ngaphezulu kuka esikhipha wafana. sici yabo esiwuphawu - ukukhanya okukhulu kakhulu esikhanyisa wonke amagumbi evulekile.
izibani Okumbi Halogen
Kukhona futhi yokuntula izibani Halogen lasekhaya. I yokuntula amadivaysi yilezi:
- ukukhanya okugqamile ezimhlophe akafani bonke abantu. It uthola emehlweni, hhayi yonke indawo kuyafaneleka. Hlangana izibani Halogen ngoba ekamelweni noma ophahleni zezingane can akuvamile. Uma efakwe futhi le ndawo, kumane engela, futhi ngaphansi kokuqondisa Electricians abanolwazi, ngokuvumelana isu lakhiwa kuzo.
- Nakuba udonga lwangaphandle kuyinto isibani okuhlala kakhulu, kodwa ke kungalimala, futhi kulokhu kuyophuma eyingozi gas womuntu. Ukuba khona kwawo ku esincane akukubi ikakhulukazi, kodwa uma galogenki hhayi eyodwa, bese-ke kungabangela isiyezi kanye migraines.
- Halogen izibani ukuze ikhaya, ngubani babe nobuthakathaka njenganoma iyiphi enye idivayisi, musa batusa ukufaka egumbini lokugezela. Nampa bedle njalo umswakama ahwamukayo futhi can esikhathini esifushane nokusebenza qhumisa.
- okuseceleni okubukhali, CAPS kanye cartridges zidinga ukulahlwa ezikhethekile. Awukwazi baphonse in ibhakede izibani Halogen lasekhaya. Ububi bayo futhi esobala. Spoilt idivaysi ofuna ukuthumela noma esitsheni jikelele indle zamakhemikhali, uma ikhona, noma ukudluliselwa inkampani, okuyinto ngokukhethekile lolo sizo.
Ngaphambi kokuba uthenge izibani Halogen lasekhaya, ukubuyekezwa wabo kufanele uhlole kuqala. Abanye abathengi kungaqalisa okwesabisa izindleko mishini, ngoba intengo itsatfwa kunakunoma izibani ejwayelekile incandescent. Namanje kuzuzisa kakhulu Halogen izibani lasekhaya. Okumbi elihlobene ne nezindleko eziphezulu ukuqala i-ukuthengwa, emva kwesikhathi ekuzithetheleleni handsomely. Kusukela Izibuyekezo ungabona ukuthi abantu bayajabula kakhulu namadivayisi okuhlala, ukulondoloza ugesi.
Galogenok ukufakwa ezahlukene kusukela ukufakwa izibani incandescent bendabuko ngoba enamathela Silica, okuyinto akutuseki uthinte, ukuze ngingasebenzisi ukuphazamisa oyiyo. Uma lokhu kwenzeka, idivayisi zingase zingasebenzi noma qhumisa. Kubalulekile ukugcina ukulandelana ecacile ukufakwa uhlelo ukukhanyisa.
Pear "Yakovlev ozithandayo": incazelo ezihlukahlukene, ikakhulukazi ukutshala, ukunakekelwa kanye nokubuyekeza